Fanakatonana ny Aterineto taona 2019: Mbola mijanona ho lohalaharana amin’ny lisitr’ireo ratsy indrindra i India · Global Voices teny Malagasy
"Hanakendana ny feon'ny mpanohitra" ny anton'ny fanapahana tao Kashmir.
Voadika ny 11 Marsa 2020 2:52 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Ελληνικά, Italiano, Español, عربي, Français, English
Sarintany mampiseho ny fanakatonana ny aterineto ao India, Janoary 2010 – Martsa 2017. Namboarin'ny Oniversiten'ny Lalàna ao Delhi sy ny Foiben'ny Seraseram-pitantanana (CC BY)
Lohalaharana amin'ny lisitr'ireo firenena izay nanakatona ny aterineto tamin'ny taona 2019 i India tamin'ny fanakatonana miisa 121 izay maherin'ny antsasaky ny tranga miisa 213 voarakitra manerantany, araka ny filazan'ny vondrona mpiaro ny zo nomerika Access Now.
Firenena miisa 33 manerantany no nanapaka aterineto raha oharina tamin'ny fanapahana miisa 25 tamin'ny taona 2018, hoy ny tatitry ny #KeepItOn momba ny fanakatonana aterineto tamin'ny taona 2019.
1 / Nitatitra momba ny fanakatonana aterineto izahay nanomboka taona 2011 niaraka tamin'ny fiaraha-miasan'ny Fiaraha-mientana #KeepitOn . Nanomboka ny tatitra tamin'ny taona 2019 izahay ankehitriny. Ireto ambany ireto ny sasany tamin'ireo fironana hitanay
Lava kokoa ny fanakatonana tamin'ny taona 2019, nokendrena kokoa tamin'ny lafiny ara-jeografika ary nahitana ny fampihenana ny hafainganam-pandeha tamin'ny fidirana tamin'ireo tambajotra sosialy toa ny Twitter sy ny Facebook.
Taorian'ny India, Venezoela no mpitarika manerantany amin'ny fanakatonana sy amin'ny fanakanana ny fidirana amin'ny sehatry ny tambajotra sosialy, in-12 farafahakeliny.
Taorian'ny Venezoela, Yemen, Irak, Alzeria, ary Ethiopia no firenena nahitana ny fanakatonana betsaka indrindra.
Nahitana tranga miisa dimy tamin'ny fanakatonana ny tolotra ho an'ny finday sy ny aterineto tao Pakistan raha nahitana telo kosa tao Indonezia.
Nametrahan'i Myanmar ny fanakatonana aterineto lava indrindra nandritra ny taona tao amin'ny fanjakana Rakhine sy Chin izay fonenan'ny Rohingya Miozolomana miisa 500.000-600.000.
Nakaton'ny manampahefana ao Bangladesh ihany koa ny fifandraisana aterineto amin'ny finday tao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana izay honenan'ny ankamaroan'ny Rohingyas. Napetraka hatramin'ny fiandohan'ny volana Septambra 2019 ny fanakatonana ary mbola mitohy hatramin'izao.
Nanamarina ny fihetsika nataony ny governemanta tamin'ny alàlan'ny filazàna fa natao hanampiana ny filaminam-bahoaka, hampitomboana ny filaminam-pirenena ary hampiatoana ny fiparitahan'ny vaovao faikany, sy ny hafa izany.
Kashmir: fanakatonana faharoa lava indrindra manerantany tamin'ny taona 2019
Taorian'ny fanafoanana ny andinin-dalàna manokana tao amin'ny lalàm-panorenana mikasika ny fanjakana Jammu sy Kashmir dia ny governemanta Indiana nandrara famoriam-bahoaka, nisambotra ireo mpitarika tao an-toerana, nanapaka ny zotra an-tariby ary nametraka ny fanapahana tanteraka ny aterineto nandritra ny 175 andro – izay faharoa-lava indrindra tamin'ny fanakatonana manerantany tamin'ny taona 2019 .
Anisan'ireo fanakatonana lava indrindra izay hita tao India hatramin'izao ihany koa io.
Nesorina ny sasany tamin'ireo famerana ireo taorian'ny nanakianan'ny Fitsarana Tampony tao India ny fanakatonana, nilaza izany ho fanapahana aterineto tsy misy fiafarany tsy araka ny lalàm-panoratana izy ireo ary nangataka ny manampahefana mba hamerina hijery indray ny fanaovan-dalàna amin'izany.
Na izany aza anefa tsy nahavita nanome vahaolana avy hatrany ny mpitondra.
Amin'izao fotoana izao, ny fifandraisan'ny aterineto 2G miadana ihany no azon'ireo mponina ao Kashmir tantanan'i India ampiasaina, voasakana tsy hiditra amin'ny sehatry ny tambajotra sosialy izy ireo ary ny tranonkala tsy voararan'ny lisitra maintin'ny governemanta ihany no azon'izy ireo jerena.
Ankoatra an'i Kashmir, nitatitra ireo tranga fanakatonana aterineto hafa tany amin'ny fanjakana Indiana hafa mba “hanakendana ireo feon'ny mpanohitra” ny #KeepItOn.
Nalefa tany amin'ny fitsarana avo tao amin'ny fanjakana Indiana maro ny fanangona-tsonia nanoherana ny fanakatonana nahazoana baiko taorian'ny hetsi-panoherana nanerana ny firenena manohitra ny (Fanitsiana) ny Lalànan'ny Zom-pirenena izay niteraka resabe sy ny tolo-dalàna mikasika Rejisitra Fandraketana ny Olom-pirenena ao Assam.
Raha nanery ny governemantam-panjakana tao Assam ny fitsarana tao an-tanàndehiben'i Gawuhati ny 20 Desambra 2019 mba hamerina indray ny fifandraisana amin'ny aterineto, izay notapahana tamin'ny 11 Desambra 2019, taorian'ny fihetsiketsehana tany amin'ny distrika miisa 10 dia namoaka didy ihany koa ny fitsarana tao Kerala tamin'ny 19 Septambra 2019 izay nankatoa ny fanangonan-tsonia nitakiana ny zo hidirana amin'ny aterineto ao amin'ny trano fandraisam-bahinin'ny zazavavy amin'ny alina.
“Manodidina ny 68% tamin'ny fanakatonana hita tany India ny fanakatonana tao Jammu sy Kashmir, manaraka azy i Uttar Pradesh, Rajasthan, ary Bengal Andrefana,” hoy ny Access Now.
Ny fanazavan'ny governemanta re matetika tamin'ity fanakatonana ny aterineto tany India ny hoe “fepetra fisorohana” na ny famerenana ny filaminam-bahoaka.
Natao hanafenana ny andiana fanitsakitsahana ny zon'olombelona mihoapapana tao Kashmir ny famerana ny tambajotra, hoy ny tatitra, toy ny fitazonana sy ny famonoana zaza, ny famerana ny fivezivezena ary ny fidirana ao amin'ny faritra ifandirana.
Azo jerena eto ny tatitra feno .